Ebee Ka I Kwesịrị itinye Mgbalị Mgbasa Ozi Gị na 2020? | Martech Zone
Mọnde, Jenụwarị 27, 2020 Mọnde, Jenụwarị 27, 2020 Douglas Karr
Kwa afọ, ndị isi na-ere ahịa na-aga n'ihu na-ebu amụma na na-agbanye usoro ha na-ahụ maka ndị ahịa ha. PAN Communications na-arụ nnukwu ọrụ mgbe niile ịnakọta ma kesaa ozi a - na afọ a, ha etinyela ihe ọmụma na-esote, 2020 CMO Amụma, iji mee ka ọ dịkwuo mfe.
Ọ bụ ezie na ndepụta nke ihe ịma aka na nka dị ka ihe na-adịghị agwụ agwụ, ekwenyere m n'ezie na a ga-eme ka ha sie ike karịa ihe atọ dị iche:
Self-Service - Atụmatụ na ndị ahịa chọrọ ijere onwe ha ozi, nke ahụ chọrọ ka ndị na-ere ahịa rụọ ọrụ dị irè nke ịnye ọdịnaya dị mkpa, na-eme ka ọ dị mfe igwu ala, na ịnye ngwaọrụ ndị ọzọ dị mkpa iji nyere aka duzie njem ha.
Ndọtị Channel - Atụmanya na ndị ahịa na-eji ọtụtụ ọwa iji mata ngwaahịa na ọrụ gị - site na ndị na-akwado mgbasa ozi mmekọrịta na nkesa ọdịnaya na nkwalite. Ndepụta ahụ na-agba ume ma na-ere ahịa taa. N'ime amụma ndị a, ị ga-ahụ bufee ọdịnaya bụ isi nchegbu. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịgbakọ teknụzụ, tinye usoro agile, ma weghachite ozi ndị azụmaahịa na ndị ahịa chọrọ n'ofe ndị ọ bụla ma ọ bụrụ na ha nwere olile anya iru ihe ha chọrọ.
Icheta - Yana ịbụ ọwa niile, ndị na-ere ahịa ga-enwerịrị ike ma hazie ọdịnaya ma ọ bụrụ na ha nwere olileanya iso na atụmanya ha chọrọ iru ma ọ bụ ndị ahịa ha chọrọ iwulite uru karịa. Nke a, ọzọ, chọrọ ngwaọrụ na atụmatụ iji mee nke a. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ B2B, nwere ike ịmegharị ihe eji eme ihe, akwụkwọ ọcha, na ibe ọdịda iji zube ọrụ, aha ọrụ, ma ọ bụ ọbụlagodi azụmaahịa, ọdịnaya ahụ ga-adị mkpa maka azụmaahịa ga-achọ.
Dika PAN Communications si achikota:
Ọnụọgụ otu ihe ịma aka e kwuru na amụma afọ a bụ ikike ịbelata mkpọtụ ma nyefee ọkwa nke ndị ahịa chọrọ nke ndị ahịa taa.
2020 CMO Prediciones: Mfe ọdịnaya, Nkwado, Data Ndị Ahịa & Nhazi onwe-anọgide na-ebute ụzọ
Enweghị mgbagha ọ bụla. Enweghị ikike, akụrụngwa, usoro, na atụmatụ iji kwado ebumnuche ndị a, ọ ga-abụrịrị na ụlọ ọrụ gị na-atụgharị uche site na eri mgbe ị na-ewepụta usoro nke usoro adịghị mma. Oge erugo ịlaghachi azụ iji nweta usoro ahia ahia nke ahụ na-arụ ọrụ nke ọma.
Tags: Brian Fanzocgsbufee ọdịnayaahịa dataDK New MediaJason bilirimartech zonematt heinzkeonweSteve krausafọ nke mmetụtathuliumtoprank ahịa